Weerar Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Weerar'
Waxa ay warar dheeri ah ay ka soo baxayaan khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo maanta lagu weeraray Saldhiga ciidamada Booliska ee Degmada Waaberi. Inta la xaqiijiyay lix qof ayaa ku geeriyootay oo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo marayay …
DEG-DEG: Wasiir Cabaas Siraaji oo Caawa Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
War Deg-Deg ah oo iminka ina soo gaaray ayaa sheegaya in Wasiir Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji, oo ahaa Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee Xukuumadda Farmaajo/Khayre caawa lagu toogtay Magaalada Muqdisho. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Wasiirka lagu rasaaseeyay afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada ee VILLA SOMALIA. Warar is khilaafsan ayaa weli ka soo baxaya …
Hoobiyeyaal loo Weday Garoonka Diyaaradaha oo ku soo Dhacay Xaafada Kaawo Godey (Dhagayso)
February 22, 2017 – Waxaa ay faah faahino horlehi ka soo baxayaan Hoobiyeyaal maanta gelinkii dambe ku soo dhacay xaafada Kaawo Godey ee Degmada Wadajir, iyadoo wararku ay sheegayaan in madaafiicdani loo waday garoonka diyaaradaha. Hoobiyahan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa waxa uu ku dhacay Guri ku yaalla xaafada Kaawo godey …
DEG-DEG: Maxamed Cumar Hagaafey oo Ahaa Afhayeenkii Hore ee Maamulka Ximan iyo Xeeb oo Muqdisho Lagu Dilay (SAWIRRO)
February 18, 2017 – Allaha u naxariistee waxaa maanta subixii magaalada Muqdisho lagu toogtay Afhayeenkii hore ee Maamulkii Ximan iyo Xeeb, Maxamed Cumar Hagafey, kaasi oo ay rag hubaysani ku weerareen Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in Dabley hubaysan oo gaari wadatay ay rasaas ku fureen gaari uu watay Afhayeenkii hore, kadibna …
Faah Faahinno ka soo Baxaya Qasaare ka Dhashay Weerarkii Hoobiyeyaasha ee Maanta Lagu Qaaday Xarunta Madaxtooyada (SAWIRRO)
February 16, 2017 – Waxaa ay faah faahinno dheeraad ahi ay kan soo baxayaan qasaaraha ka dhashay tiro Hoobiyeyaal ah oo maanta duhurnimadii loo waday Xarunta Madaxtooyada kuwaasi oo ku soo dhacay agagaarka xaafada 15-ka May ee Degmada Warta-nabadda. Dadka xaafadahaasi ku nool ayaa warbaahinta u sheegay in tirada madaafiicdani ay ahaayeen ilaa 4 xabo, …
Oday Nabaddoon ahaa oo Caawa Lagu Toogtay Dagmeda Wadajir ee Magaalaga Muqdisho
February 15, 2017 – Kooxo bistoolado ku hubeysani ayaa caawa oday nabaddoon ahaa ku dilay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, kadib markii uu ka soo baxay masjid uu salaada maqrib ku tukaday. Odaygan nabadoonka ayaa lagu magacaabi jiray, Muuse Maxamuud Rooble (Muuse Ilka-weyne) oo ka tirsanaa nabadoonada caanka ah ee beelaha Soomaliyeed. Dilka nabadoonkani ayaa …
Hoobiyeyaal Caawa Lagu Garaacay Xaafado Katirsan Degmooyinka Gobolka Banaadir (VIDEO)
February 07, 2017 –Waxaa caawa xaafado ka tirsan Gobolka Banaadir laga maqlayay dhawaqa weeraro Hoobiyeyaal ah, sida ay warmaahinta u sheegeen Dadka Degaanadaasi ku nool. Degmooyinka ay caawa hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa degmeda Waaberi, Xamar jajab, Xamar weyne iyo Warta-nabadda. Madaafiicdan ayaa laga maqlay guud ahaan degmooyinka Gobolka Banaadir, …